ကိုယ့်ပရိသတ်ကိုယ်တောင် ဟမ်ဘာဂါစျေးတင်ရောင်းပြီး ဂျင်းထည့်လို့ အာဆင်နယ်တို့ ဝေဖန်ခံနေရ | Duwun
အာဆင်နယ်ကွင်းက ဟမ်ဘာဂါ စျေးကြီးလို့ ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်နေတာပါ။
အာဆင်နယ်ကွင်းမှာ ရောင်းချတဲ့ ဟမ်ဘာဂါက ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ ဟမ်ဘာဂါအပြင် အာလူးချောင်းကြော်လည်း ပါဝင်တဲ့ ဒီ Set အတွက် ပရိသတ်တွေက (၁၈.၀၅) ပေါင်အထိ ပေးချေစားသောက်ရမှာပါ။
ဒီဟမ်ဘာဂါတလုံးတည်းရဲ့ စျေးနှုန်းက (၁၄.၃) ပေါင်အထိရှိပြီး အာလူးချောင်းကြော်ပါ ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အပို (၃.၇၅) ပေါင် ထပ်မံပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေက အကြီးအကျယ်ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ပရိသတ်တယောက်က “တယောက်ယောက်က ဒီစျေးကိုမြင်ပြီး ဝယ်စားတဲ့သူရှိဦးမှာလား” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် အာဆင်နယ်ပရိသတ်တယောက်က “ငါ့သာ လာလုပ်သွားကြပါတော့ကွာ။ အဲ့ဒီ ဟမ်ဘာဂါကို ဘယ်သူက လုပ်ပေးတာလဲ”
“ဂေါ်ဒွန်ရမ်ဆေးလား? Salt Bae လား? ရွှေပန်းကန်ပြားနဲ့ ချကျွေးတာလား? ငါ့သာ လာလုပ်ပါတော့” လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “ဒီစျေးနဲ့ဆိုရင်တော့ ငါက အဝတ်လဲခန်းထဲ ဝင်စားမှာပေါ့။ ပြီးရင် သူတို့ ပထမပိုင်းပြီးရင် ဘာတွေပြောလဲ နားထောင်မယ်။ အေး ပြီးရင်တော့ ဒါရိုက်တာတွေထိုင်တဲ့ခုံမှာ သွားထိုင်ပြီး ဘောလုံးပွဲကြည့်မှာ” လို့လည်း နောက်တယောက်က ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
အခြားသော အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကလည်း “(၁၈.၀၅) ပေါင်ဆိုရင် စကော့တလန်မှာ ဘောလုံးအသင်းတသင်းရဲ့ ရှယ်ယာ (၈၅) ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ ဝယ်လို့ရတယ်” “သူတို့ ဒီလိုစျေးတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက လူတွေက ဝယ်စားမှာကို သိလို့ပါ။ ဒီတော့ ဘောလုံးပရိသတ်တွေရေ... ပွဲလာမကြည့်ခင် ကိုယ့်အိမ်က တခုခုစားလာခဲ့ပါ” လို့ အသီးသီး ဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။